Agaasimaha Guddida Qandaraasyada Qaranka, oo lacag badan ku bixiyay Xaflad shaki weyn ka abuurtay Magaalada Laascaanood oo bulshada kala qaybisay | Berberanews.com
Home WARARKA Agaasimaha Guddida Qandaraasyada Qaranka, oo lacag badan ku bixiyay Xaflad shaki weyn...
Agaasimaha Guddida Qandaraasyada Qaranka, oo lacag badan ku bixiyay Xaflad shaki weyn ka abuurtay Magaalada Laascaanood oo bulshada kala qaybisay
Maxay daarantahay “Xusuustii aasaaskii Dhaqdhaqaaqii Daraawiishta” ?
Laascaanood-(Berberanews)-Agaasimaha Guddida Qandraasyada Somaliland. Jabarti Axmed Xasan ayaa lacag badan ku kharash gareeyay sidii ay u qabsoomi lahayd xaflad aan hore uga dhicin Somaliland.
Xafladan oo lagu qabtay magaalada laascaanood ee magaalo-madaxda Gobolka Sool, ayaa waxaa loogu magac daray “Xusuustii aasaaskii Dhaqdhaqaaqii Daraawiishta”
Dhowr cisho ka hor ayuu Jabarti dhalinyarada magaalada laascaanood ku wargaliyay in uu damacsan yahay sidii loo soo noolayn lahaa taariikhdii Daraawiishta isla markaana dhalinyarada gobolka Sool loo bari lahaa taariihdaasi, wixii kharash iyo dhaqaale ee ku baxaayana uu isagu bixin doono.
Agaasime Jabarti ayaa magaalada Hargeysa ka diray wixii lacag iyo kharash ah ee lagu qaban lahaa xafladaasi, waxa kale oo uu magacaabay xubno guddi ah oo isku duba rida qabashada xafladaas.
Agaasime Jabarti ayaa magaalada Laascaanood u diray lacag badan oo ahayd xaqul qalin uu ka qaaday qaar ka mid ah shirkado iyo shaqsiyaad uu si baalmarsan sharciga u siiyay qandaraasyo.
Xafladan oo ahayd mid wadatay ujeedo ka balaadhan ta lagu sheegay ayay walaac ka muujiyeen dadweynaha magaalada laascaanood, iyagoo sheegay in ay keeni karto gadood iyo kacdoon ka dhaca magaalada, maadama oo loo sheegaayo taariikh khaldan oo aan meelna ka soo galin Daraawiish,
ilaa hada lama garanaayo ujeedada uu ka leeyahay Agaasime Jabarti xaflada iyo sababta uu dhalinyarada gobolka Sool uga dhaadhicinaayo fikirkii Daraawiishta.
Magaalada laascaanood waxa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay laga dareemaayay lacagaha xad dhaafka ah ee uu Agaasime Jabarti u diray. waxana goobaha dhalinyaradu isugu timaado lagu arkaayay dhalinyaro kala fikir duwan oo qaarkoodna taageersan yihiin fikirka uu wato Agaasime Jabarti ee ah Daraawiishta, halka qaar kalena ku tilmaameen in ay tahay fidmo gobolka lagu soo dhex tuuray. oo lagu kala qaybinaayo shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood.
Siyaasiyiin kala duwan oo jooga magaalada Hargeysa oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Gobolka Sool ayaa madaxweyne Muuse Biixi ugu baaqay in uu kala doorto nabada iyo wada noolaanshaha shacabka ku dhaqan laascaanood iyo Agaasime Jabarti.
waxanay Madaxweyne Muuse Biixi ugu baaqeen in uu gobolka ka qabto Agaasime Jabarti iyo lacagta uu isugu dhiibaayo dhalinyarada Gobolka Sool ee lagu baraayo taariikhda khaldan ee Daraawiishta.
Weriyayaasha Shabakada Berberanews ayaa isha ku haya xaalada magaalada Laascaanood iyo fikirka cusub ee Daraawiishta ee uu Agaasime Jabarti ka wado magaalada.
Previous articleKim: Wadahadallo furan ayaan diyaar u ahay haddii ‘Mareykanka uu wax beddelo qaabka wadahadalka’
Next articleItoobiya oo fashilisay weerar argagixiso oo laga fulin lahaa qaybo ka mid ah magaalada Addis Ababa